जलवायुसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा सबै देश बोलाउने अमेरिकाले नेपाललाई किन बोलाएन ? - Himali Patrika
जलवायुसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा सबै देश बोलाउने अमेरिकाले नेपाललाई किन बोलाएन ?
हिमाली पत्रिका १९ चैत्र २०७७, 2:25 pm
काठमाडौं । अप्रिल २२ र २३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वका नेताहरुको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछन् ।
ह्वाइट हाउसले सो सम्मेलनमा सहभागी हुने ४० वटा देशका प्रतिनिधिहरुको नाम नै सार्वजनिक गरेको छ तर त्यसमा नेपाल परेको छैन । यस अगाडि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत याण्डी बेरीले नेपालले गर्न लागेको सगरमाथा संवादका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
यस अगाडिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेका थिए । त्यसपछि यो मुद्दामा विश्वव्यापी नेतृत्व नै खड्किएको थियो ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार विश्वका नेताहरुको सो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा बलियो नेतृत्व लिएका मुलुक, जलवायु परिवर्तनको हिसाबले एकदमै संवेदनशील अबस्थामा रहेका मुलुकहरु र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नयाँ कदम चालेका मुलुकहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
केही व्यापारी र नागरिक समाजका व्यक्तिहरु समेत सो सम्मेलनमा सहभागी हुने छन् । यतिवेला विश्वको ध्यान विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा राख्नेमा छ । अमेरिकाले गर्न लागेको सम्मेलन र कोप–२६ को मूल उद्देश्य पनि यही हो ।
सो सम्मेलनमा अमेरिकाले सन् २०३० सम्म प्राप्त गर्ने कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी नयाँ लक्ष्यको समेत घोषणा गर्नेछ । शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन पठाएको निम्तोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले सरकार र राष्ट्र प्रमुखलाई आ–आफ्नो मुलुकको लक्ष्य प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन् । अनलाइनखबरबाट